Ma tahay shaqaale dowladeed, isbitaal ama wakiil dhul oo waxaad dooneysaa inaad beddesho shaqooyinka? Ma waxaad boos qandaraas ka raadinaysaa shaqaalaha dawladda? Place de l'emploi dadweynaha, goobta loogu talagalay qorista iyo dhaqdhaqaaqa shaqaalaha rayidka ah ayaa leh waji-qaadid. Aqoonsiga aragga oo la beddelay, astaamo cusub si loo waafajiyo filashooyinka isticmaale, madalku wuxuu bixiyaa musharraxiinta khibrad isticmaale oo la wanaajiyey.
Goobta Dadweynaha ee Place de l'Emploi (PEP) waxay leedahay muuqaal cusub Febraayo 25, 2022Tranquillus
READ Maamul isgaarsiinta suuq geynta internetka ee isku dhafan